Salvadôriana 1 amin’ny 10 no tratry ny aretina mitaiza ny voa (MRC), ka isan’ireny ny ankizy · Global Voices teny Malagasy
Noho ny COVID-19, mihasarotra ny toeran'ireo ankizy tratry ny MRC
Voadika ny 31 Desambra 2020 14:49 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, 日本語, Français, English
Araka ny fanadihadiana iray natao tamin'ny 2019 notombanan'ireo namana [angl] ao amin'ny MEDICC, « tonga amin'ny fetra maha-areti-mandringana azy izao ny MRC (aretina mitaiza mahazo ny voa) ao Salvador ». Tena nahatalanjona ny isan'ireo olona tratran'io aretina misoko mangina io ; io no antony faharoa mahatonga fahafatesana eny anivon'ny lehilahy, ary antony fahatelo miteraka fahafatesan'olondehibe any amin'ny hopitaly. Hita tamin'ny tatitra iray tamin'ny 2017 avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana ao Salvador fa 12,6% amin'ny vahoaka no nararin'ny MRC ho an'ny taona 2014 sy 2015.
Ny 2014 hatramin'ny 2018, 1 833 ny tranga nahitàna ireo ankizy tsy ampy taona tratry ny MRC no voarakitra teny amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Isan'ireo faripiadidiana tena naharaisana tarehimarika avo ny tao San Miguel, any atsinanan'ny firenena, sy San Salvador, renivohitra.
Salvador Magaña, dokotera mpitsabo ny voa, miasa ao amin'ny faripiadidian'i San Miguel, nanipika fa tsy mahafehy ny fahazàrany amin'ny sakafo haniny ny tanora. Araka izany, mba hiatrehan'izy ireo ny hafanana be sy ny danik'andro, misafidy mora foana ireo vokatra mety hiteraka aretin'ny voa ry zareo fa tsy ny rano. Mihoatra ny iray tapitrisa ireo Salvadoriàna, ampahenin'ny vahoaka, no zara raha mahazo rano fisotro [fr].
Isambolana dia mila fikarakarana manokana antsoina hoe “hémodialyse” (fanadiovana ny rà) ireo ankzy sy tanora tratr'ity aretina ity, izay mahatonga azy ireo ho marefo sy osa. Ankoatr'ireo dia miatrika fanamby hafa ihany koa ireo ankizy ireo, toy ny fitetezana rafi-pitsaboana iray tsy manjary ao Salvador.
Noho ny fepetra noraisina hiadiana amin'ny COVID-19, nakatona nandritra ny herinandro maro ny fitateram-bahoaka, izay nianteheran'ny ankamaroan'ireo fianakaviana rehefa handeha hitsidika any amin'ny hôpitaly. Ankoatra izay, vitsy ireo mpiasa nisahana ny hôpitaly satria marobe tamin'ireo mpiasan'ny fahasalamana no tratry ny COVID-19. Nisy fiantraikany tamin'ny fahafahana mahazo fitsaboana ny IRC ireo olana roa ireo.
Hatramin'ny fahazazàny, iray amin'ireo ankizy manaraka fitsaboana IRC ao amin'ny hôpitalim-panjakana iray ao San Salvador natao ho an'ny ankizy i Carlos Daniel Gonzalez. Kanefa, hatramin'ny nankalazàn'i Carlos ny faha-20 taonany tamin'ity taona ity, sahirana izy ny fianakaviany mitady hôpitalim-panjakana hafa afaka hanome azy ny fikarakarana ilainy. Safidy ratsy ho azy ny tsy fahazoana fikarakarana isankerinandro.Tsy ananan'ireo hôpitalim-panjakana marobe ao Salvador ny fitaovana sy fanafody ilaina entina mitsabo an'i Carlos, ary noho ny ara-bola dia tsy vita ny hoe handeha any amina hôpitaly tsy miankina, hoy i Esmeralda Fernandez reniny, raha tafaresaka tamin'ny Global Voices tamin'ny alàlan'ny WhatsApp.
Carlos Daniel Gonzalez. Sary an'ny Orina Iris Violeta, nahazoana alàlana
Hoy i Otilia Sorto Fuentes avy amin'ny rantsana amerikàna ao amin'ny Orina Iris Violeta raha niresaka an-telefaona tamin'ny Global Voices :
Any amin'ny hôpitaly tsy miankina iray, 125 dôlara amerikana isaky ny tonga hitsabo tena, nefa in-2 isankerinandro i Carlos no mila izany, izany hoe im-8 isambolana. Ahoana no hahafahan'ny fianakaviany mandoa 1.000 dôlara amerikàna isambolana ao amina firenena iray izay manodidina ny 300 dôlara amerikàna ny karama farany ambany? Tsy vita tsotra izao izany!
Iray amin'ireo tetikasan'ny Fundacionirisvioleta.org ny fanomezana vitamina an'ireo marary voa ao amin'ny hôpitaly Benjamin Bloom ao San Salvador, isambolana izahay no manao izany, ho an'ankizy mitotaly 37 miatrika “hémodialyse”.
Francis Zablah, solombavambahoaka ao amin'ny departamantan'i La Libertad ao amin'ny Antenimiera mpanao lalàna salvadoriàna, nilaza tamin'ny Global Voices tao amin'ny Twitter hoe:
Raha ny mahazatra, ireo olona ahiana ho mety mora mararin'io MRC io dia miaina tosidrà avo sy diabeta. Kanefa, maro dia maro ny olona erantany, ary amin'ity tranga ity, ao Salvador, no voan'ny MRC noho izy ireo ianjadian'ny vokatra simika sy ny tsy fahampian-drano.